Taghazout Bay: Kwayakavakirwa pane yakasvibirira DNA
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kutarisirwa » Taghazout Bay: Kwayakavakirwa pane yakasvibirira DNA
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Marokero Kuputsa Nhau • nhau • Dhinda Zviziviso • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Taghazout Bay, inzvimbo inosvika 615 ha muMorocco, yakagadzirirwa neSocial d'Aménagement et de Promotion de la station de Taghazout (SAPST). Maitiro ayo ekusimudzira ese ane nharaunda ane hushamwari uye akanyatsobatanidzwa mukati medunhu nenzvimbo yayo yemagariro nehupfumi.
Kuburikidza neGreen Globe certification yezvikamu zvayo zvitatu - Tazegzout Gorofu, Hyatt Nzvimbo uye Sol Imba - Taghazout Bay inosimbisa kuzvipira kwayo kubatanidza kuenderera kwete chete mukuvandudzwa kwezvinhu zvayo, asi sezvo ichiita maitiro akanakisa mukuita kwayo kwezuva nezuva. Zvese zvitatu zvinhu, zvakatanga kusimbiswa muna2016, zvakapihwa zvekare Green Globe chitupa muna2017, semhedzisiro yekuedza kwemazuva ese kwevashandi kuita zviitwa zvine mutsindo uye kuramba vachirwisa kuvandudza kunopfuurira.
Imba yega yega yakawana budiriro munzvimbo dzekuchengetedza manejimendi kusanganisira manejimendi manejimendi uye zvirongwa zveveruzhinji. KuGorofu Kirabhu, mhedzisiro yakakwenenzverwa ne 40% kudzikisira mukushandisa kwemvura uye 22% kudzikiswa mukushandisa kwesimba kwemagetsi. Kuderera kwekushandisa kwemvura kunoitiswa nekugadzirisa zvirinani kwekudonha kwemvura uye neyakaongororwa nzira yekudiridza iyo inoshandiswa kugadzirisa turf. KuSol House, kuyedza kwakaitwa kugadzirisa zvirinani zvakasvibira kuburikidza nekugadzirwa kwenzvimbo ine composting, kumisikidzwa kwe organic organic kicheni bindu nemuriwo uye mahebhu pamwe nekutsigira kwezviitiko zvakawanda zvechipo. Nepo gore rino kuHyatt Place, kuchengetedza magetsi kwaive chinhu chakakosha apo kuzadzikiswa kwemazano ehunyanzvi zvichikonzerwa nekuongororwa kwesimba kwakafambiswa nechirongwa chakakura chedzidzo chakanangana nekusimudzira ruzivo pakati pevashandi vese.
Tazegzout Gorofu, Hyatt Nzvimbo uye Sol House zvakare inoshanda pamwe chete nguva dzese kutora chikamu muzvirongwa zvekubatana. Misangano yakati wandei yeGreen Team Taghazout Bay, inofambiswa neSAPST inoitiswa kuunza pamwechete maneja matatu ezvivakwa zvevashanyi nechinangwa chekuchinjana nekugovana nzira dzakanakisa mukusimudzira kwakasimba. Kuongororwa kweakabhoni tsoka yekugadzwa kwega kwega kunoitwa uye chirongwa chekuita chakagadziridzwa uye chakabatanidzwa kudzikisa mweya.
Kukudziridza matunhu chikamu chehurongwa hwekushomeka kwegadziriro yekutandarira. Kuzadzikiswa kweyakajairika mutemo wekutenga kuti ubatanidze kutenga kwezvimwe zvigadzirwa zvechikafu uye zvekushandisa zviripo kugadzirisa mari uye kudzikisira kutakurwa kunoenderana neEC2 emissions. Uye zvakare, kukwidziridzwa kwezvigadzirwa zvemuno nemaoko emaoko munzvimbo dzese kuburikidza nekuratidzira kwenguva pfupi kunokurudzirwa.
Zvinoenderana nezvinangwa zvavo zveCSR, kuumbwa kweGorofu neSurf Academies uye kudzidziswa kwevechidiki kubva munharaunda dzakavakidzana kwakamiswa mukati mehurongwa hwechirongwa cheMitambo Yekudzidza chinotsigirwa neSAPST. Chinangwa chikuru ndechekutsvaga vanhu vane tarenda vane mukana wekuve chamangwana chamangwana. Uye zvakare, Hyatt Place uye Sol House yakatsigira kurongeka kwemakwikwi erufu gorofu nemari yakapihwa kumasangano emuno.
Kuzvipira mukusimudzira hakuchisiri sarudzo yeTaghazout Bay uye chimwe nechimwe chezvinhu zvacho, asi chimwe chinhu chakadzika midzi muDNA yayo.
Green Globe ndiyo yepasi rose yekusimudzira sisitimu yakavakirwa pamatanho anotambirwa epasi rese ekuchengetedza mashandiro uye manejimendi emabhizimusi ekufamba uye ekushanya Inoshanda pasi pezenisi repasirese, Green Globe iri muCalifornia, USA uye inomiririrwa munyika dzinopfuura makumi masere nematatu. Green Globe inhengo yakabatana yeUnited Nations World Tourism Organisation (UNWTO). Kuti uwane ruzivo, ndapota shanya www.vaperempire.com
Mutsva Wekiriniki Yekuyedza Yekuferefeta Mushonga Mutsva Wekurapa Alopecia January 26, 2022
Dzimwe Mhuka Dziri Kutorwa Sevafambidzani Munyika Yose January 26, 2022
Mutungamiri weUganda Anoita Zvakanaka Kuvhurazve hupfumi January 26, 2022